ညီနေမင်း: Blog Template Logo Icon များ
Blog Template Logo Icon များ
Blog template logo icon တွေကိုတော့ သိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရဲ့ Logo ဟာ ၄င်းဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာရဲ့ အရှေ့မှာရှိပါတယ် ... ကျွန်တော် အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးသား logo လေးများကို ရှာပြီးတော့ share ပေးလိုက်ပါတယ် ...
Logo ကို web ပေါ်မတင်ခင် http://www.fileden.com မှာ အကောင့်လုပ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်.
ဖိုတိုရှော့ကတော့ မပါမဖြစ်ဆိုသလို ပါမှာပါ .. အဲ့ဒီ့တော့ Adobe photoshop ကိုလဲ install လုပ်ထားပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ..
အောက်မှာ အဆင်သင့်သုံးလို့ရအောင် ကျွန်တော် logo တွေကို ရှယ်ထားပါတယ် .. ifile.it ၊ 4shared နှင့် mediafire ကနေ သုံးနေရာ ခွဲပြီးတင်ပေးထားပါတယ် ... အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်က သုံးဖိုင်ပါ ..
ကဲအားလုံး download ချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ စလုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ ...
ပုံနှင့်တစ်ဆင့်ချင်းဆီ ပြထားပါတယ် .. photoshop အကြောင်းနားလည်တဲ့သူအတွက် မခက်ပေမယ့် နားမလည်တဲ့သူတွေအတွက် ခက်နေမှာစိုးလို့ တစ်ဆင့်ချင်းပြထားတာပါ. နှာခေါင်းမရှုံ့စေချင်ပါဘူး ..
ကဲ adobe photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးတာနဲ့ ကို့စိတ်ကြိုက် log ရှိတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ... ပြီးတာနဲ့ ပုံထဲက အတိုင်း photoshop က marquee tool (sh Key = m) ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုကြိုက်တဲ့ logo လေးကို ပုံထဲကအတိုင်း ဖိပြီးဆွဲလိုက်ပါ ...
ပြီးရင် ctrl + n (new) ကိုနှိပ်ပါ ပေါ်လာတဲ့အကွက်ထဲမှာ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းပေးလိုက်ပါ 32 pixels x 32 pixels ဆိုပြီးဖြည့်ပေးလိုက်ပါ ပြီးတာနဲ့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ file အသစ်တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ပေါ်လာတဲ့ဖိုင်ထဲကို ကိုကြိုက်တဲ့ icon လေးကို ဆွဲပြီးထည့်လိုက်ပါ ...
ပြီးတာနဲ့ jpeg နဲ့ destktop မှာ save ပေးလိုက်ပါ ...
desktop မှာရောက်နေတဲ့ ဖိုင်လေးကို paint နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ save as လုပ်လိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့ file name နေရာမှာ တစ်ခုခုဖြည့်ပြီး နောက်က .ico နဲ့သိမ်းပေးပါ. (example => nyinaymin.ico) သိမ်းပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ဖိုင်လေးကို http://www.fileden.com/ မှာ သွားပြီး upload လုပ်ရမှာပါ. လုပ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. မလုပ်တတ်ရင်လဲ ကျွန်တော် နောက်တစ်ခါ ပို့စ်တစ်ပို့စ်ရေးပေးပါဦးမယ်။ ရလာတဲ့လင့်ကို http://ဘာညာသာရကာ/ ဆိုပြီးရှိတဲ့နေရာလေးကိုပဲ copy ကူးမှာပါ.. နောက်က ပါလာတဲ့ ကုတ်တွေကို မကူးပါဘူး။ http://www.fileden.com/files/2008/10/10/2137481/nyinaymin.ico အဲ့ဒီ့လိုလေးရလာမှာပါ . မသေချာဘူးဆိုရင် address bar မှာ ရိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ .. icon ပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်.
အဲ့ဒီ့လင့်လေးရလာအောင် အောက်ပါပုံအတိုင်း ယူလိုက်ပါ
ရလာတဲ့ဖိုင်လေးကို http://www.fileden.com မှာတင်လိုက်ပါ .. တင်လိုက်လို့ရလာတဲ့ လင့်လေးကို အောက်က အနီရောင်စာသား နေရာမှာ ဖြည့်ရမှာပါ.
Posted by ညီနေမင်း at 12:01 AM
Labels: Blog and Html
k2tmaung October 7, 2009 at 5:14 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... ကိုညီနေမင်းရေ... ခုမှ သိလို့...:P
ချစ်စရာ animation ပုံများ
အရမ်းလှတဲ့ animation ပုံလေးတွေပါ
html code နားမလည်ဘဲ Blog template တစ်ခုချင်းစီကို ...
ထူးထူးဆန်းဆန်းအပင်များနှင့် တိရိ စ္ဆာန်များ
Mobile Phone ခြေရာခံစနစ်
ifile.it နှင့် ဘယ်လို download လုပ်မလဲ
အကောင်းဆုံး Blog Template များ
Movies site များ